Ukufaka isicelo semvume yokusebenza eNetherlands | Law & More B.V.
Blog » Ukufaka isicelo semvume yokusebenza eNetherlands. Yilokhu wena njengesakhamuzi sase-UK odinga ukukwazi.
Kuze kube ngumhla zingama-31 kuZibandlela 2020, yonke imithetho ye-EU ibisebenza e-United Kingdom futhi izakhamizi ezinobuzwe baseBrithani zingaqala kalula ukusebenza ezinkampanini zaseDashi, okungukuthi, ngaphandle kwemvume yokuhlala noma imvume yokusebenza. Kodwa-ke, ngenkathi i-United Kingdom ishiya i-European Union ngoDisemba 31, 2020, isimo sesishintshile. Ingabe uyisakhamuzi saseBrithani futhi ufuna ukusebenza eNetherlands ngemuva kukaDisemba 31, 2020? Bese kunezinto eziningi ezibalulekile okufanele uzigcine engqondweni. Kusukela ngaleso sikhathi kuqhubeke, imithetho ye-EU ayisasebenzi e-United Kingdom futhi amalungelo akho azolawulwa ngesisekelo sesivumelwano sezohwebo nokubambisana, i-European Union ne-United Kingdom abavumelene ngaso.
Kwenzeka ukuthi, isivumelwano sezohwebo nokubambisana siqukethe izivumelwano ezimbalwa ngokuphathelene nezakhamizi zaseBrithani ezisebenza eNetherlands kusukela ngomhlaka 1 Januwari 2021. Ngenxa yalokho, imithetho kazwelonke yezakhamizi ezingaphandle kwe-EU (umuntu ongenabo ubuzwe be-EU / EEA noma Switzerland) ukuvunyelwa ukusebenza eNetherlands. Kulesi simo, i-Foreign Nationals Employment Act (WAV) icacisa ukuthi isakhamuzi esingaphandle kwe-EU sidinga imvume yokusebenza eNetherlands. Kunezinhlobo ezimbili zemvume yokusebenza ongasifaka isicelo, kuya ngesikhathi ohlela ukwenza ngaso umsebenzi eNetherlands:
imvume yokusebenza (i-TWV) kusuka ku-UWV, uma uzohlala eNetherlands izinsuku ezingaphansi kwezingu-90.
imvume yokuhlala ehlangene neyokusebenza (GVVA) kusuka e-IND, uma uzohlala eNetherlands isikhathi esingaphezu kwezinsuku ezingama-90.
Kuzo zombili izinhlobo zemvume yokusebenza, awukwazi ukufaka isicelo ku-UWV noma ku-IND ngokwakho. Imvume yokusebenza kumele ifakelwe isicelo ngumqashi wakho kuziphathimandla ezingenhla. Kodwa-ke, kufanele kuhlangatshezwane nemibandela eminingana ngaphambi kokuba kunikezwe imvume yokusebenza yesikhundla ofisa ukusifeza eNetherlands njengeBrithani ngakho-ke isakhamuzi esivela ngaphandle kwe-EU.
Abekho abazongenela ukhetho eDutch noma emakethe yezabasebenzi yaseYurophu
Esinye sezimo ezibalulekile zokunikezwa kwe-TWV noma imvume yokusebenza ye-GVVA ukuthi akukho "okubekwa phambili" emakethe yezabasebenzi yaseDashi noma yaseYurophu. Lokhu kusho ukuthi umqashi wakho kufanele aqale athole abasebenzi eNetherlands nase-EEA futhi enze leso sikhala saziwe ku-UWV ngokusibika endaweni yokusebenzela umqashi ye-UWV noma ngokuyithumela lapho. Kuphela uma umqashi wakho waseDashi engakhombisa ukuthi imizamo yakhe yokuqasha ayizange iholele emiphumeleni, ngomqondo wokuthi akukho basebenzi baseDashi noma be-EEA abebelungele noma bekhona, lapho ungangena emsebenzini nalo mqashi. Okungenzeka ukuthi, lesi simo esishiwo ngenhla sisetshenziswa ngokungagunci esimweni sokudlulisa abasebenzi eqenjini lamazwe omhlaba nalapho kuthinta abasebenzi bezemfundo, abaculi, abafundisi bezivakashi noma abafundi. Ngemuva kwakho konke, lezi zakhamizi (zaseBrithani) ezivela ngaphandle kwe-EU akulindelekile ukuthi zingene unomphela ezimakethe zabasebenzi baseDashi.
Imvume yokuhlala esemthethweni yesisebenzi esivela ngaphandle kwe-EU
Esinye isimo esibalulekile esibekiwe ekunikezelweni kwe-TWV noma imvume yokusebenza ye-GVVA ukuthi wena, njengomuntu waseBrithani futhi ngenxa yalokho uyisakhamuzi esingaphandle kwe-EU, unayo (noma uzothola) imvume yokuhlala esebenzayo ongasebenza ngayo eNetherlands. Kunezimvume ezahlukahlukene zokuhlala eNetherlands. Yimuphi imvume yokuhlala oyidingayo enqunywa ngokwesisekelo sobude besikhathi ofuna ukusisebenzisela iNetherlands. Uma lokho kufushane kunezinsuku ezingama-90, ngokuvamile i-visa yokuhlala isikhathi esifushane yanele. Ungafaka isicelo sale visa embasi yaseDashi ezweni lakini noma ezweni ohlala kulo ngokuqhubekayo.
Kodwa-ke, uma ufuna ukusebenza eNetherlands izinsuku ezingaphezu kwezingu-90, uhlobo lwemvume yokuhlala luxhomeke emsebenzini ofuna ukuwenza eNetherlands:
Dlulisa ngaphakathi kwenkampani. Uma usebenzela inkampani engaphandle kwe-European Union futhi udluliselwa egatsheni laseDashi njengomqeqeshi, umphathi noma uchwepheshe, umqashi wakho waseDashi angafaka isicelo semvume yokuhlala kuwe e-IND ngaphansi kwe-GVVA. Ukuze unikeze imvume yokuhlala enjalo, kufanele uhlangabezane nemibandela eminingi ngaphezu kwezimo eziningi ezijwayelekile, njengobufakazi obusemthethweni bokuthi ungubani kanye nesitifiketi sangemuva, kufaka phakathi inkontileka yokusebenza esemthethweni nenkampani esungulwe ngaphandle kwe-EU. Ngeminye imininingwane mayelana nokudluliswa kwebhizinisi kanye nemvume yokuhlala ehambisanayo, sicela uxhumane Law & More.
Abafuduki abanamakhono kakhulu. Imvume yokufuduka enamakhono kakhulu ingasetshenziswa kubasebenzi abaqeqeshiwe abavela emazweni angaphandle kwe-European Union abazosebenza eNetherlands esikhundleni sokuphatha esiphezulu noma njengongoti. Isicelo salokhu senziwa kwi-IND ngumqashi ngaphakathi kohlaka lwe-GVVA. Ngakho-ke le mvume yokuhlala akudingeki ukuthi uyisebenzisele wena wedwa. Kepha kufanele uhlangane nemibandela eminingi ngaphambi kokunikeza lokhu. Lezi zimo nolwazi oluthe xaxa ngazo zingatholakala ekhasini lethu Ulwazi lokufuduka. Uyacelwa uqaphele: izimo ezihlukile (ezingeziwe) ziyasebenza kubaphenyi besayensi ngaphakathi kwencazelo ye-Directive (EU) 2016/801. Ungumcwaningi waseBrithani ofuna ukusebenza eNetherlands ngokwesiqondiso? Bese uxhumane Law & More. Ochwepheshe bethu emkhakheni wezokufuduka kanye nomthetho wokuqashwa bayakujabulela ukukusiza.
I-European Blue Card. I-European Blue Card yindawo yokuhlala ehlangene nemvume yokusebenza yabafuduki abafunde kakhulu kulabo, njengezakhamizi zaseBrithani, abanabo ubuzwe belinye lamaLungu Amazwe e-European Union kusukela ngoDisemba 31, 2020, nabo ababhaliswe ne IND ngumqashi ngaphakathi kohlaka lwe-GVVA kufanele kufakelwe isicelo. Njengomphathi we-European Blue Card, ungaqala futhi ukusebenza kwelinye iLungu Lombuso ngemuva kokusebenza eNetherlands izinyanga eziyi-18, inqobo nje uma uhlangabezana nemibandela ekulelo Lungu Lombuso. Ungafunda nokuthi yiziphi lezi zimo ekhasini lethu Ulwazi lokufuduka.
Ukuqashwa okukhokhelwayo. Ngaphezu kokukhethwa kukho okungenhla, kunezinye izimvume eziningi ngenhloso yokuhlala emsebenzini okhokhelwayo. Ngabe awuziboni yini wena kulezi zimo ezingenhla, ngokwesibonelo ngoba ufuna ukusebenza njengesisebenzi saseBrithani endaweni ethile yaseDashi kwezobuciko namasiko noma njengombhali waseBrithani osebenzela umphakathi waseDashi? Uma kunjalo, imvume yokuhlala ehlukile izosebenza kuwe futhi kufanele uhlangabezane neminye imibandela (eyengeziwe). Imvume yokuhlala ngqo oyidingayo incike esimeni sakho. Ngo- Law & More singakwazi ukunquma lokhu ndawonye nawe futhi ngesisekelo salokhu sinqume ukuthi yiziphi izimo okufanele uhlangabezane nazo.
Ayikho imvume yokusebenza edingekayo
Kwezinye izimo, wena njengesakhamuzi saseBrithani awudingi imvume yokusebenza ye-TWV noma ye-GVAA. Uyacelwa ukuthi uqaphele ukuthi ezimweni eziningi ezehlukile kusadingeka ukwazi ukwethula imvume yokuhlala efanele futhi kwesinye isikhathi ubike ku-UWV. Okuhlukile okubili okuyinhloko kwimvume yokusebenza okuvamise ukuthi kube okufanele kakhulu kubhalwe ngezansi:
Izakhamizi zaseBrithani (eza) zizohlala eNetherlands ngaphambi komhlaka 31 Disemba 2020. Lezi zakhamizi zimbozwe yisivumelwano sokuhoxa esenziwe phakathi kwe-United Kingdom neNetherlands. Lokhu kusho ukuthi noma ngabe i-United Kingdom isishiyile i-European Union, lezi zakhamizi zaseBrithani zingaqhubeka nokusebenza eNetherlands ngaphandle kwemvume yokusebenza. Lokhu kusebenza kuphela uma izakhamizi zaseBrithani okukhulunywa ngazo ziphethe imvume yokuhlala ngokusemthethweni, efana nedokhumende elihlala unomphela le-EU. Ingabe ungowalesi sigaba, kepha awukabi nawo umbhalo ovumelekile wokuhlala kwakho eNetherlands? Ngemuva kwalokho kuwukuhlakanipha ukufaka isicelo semvume yokuhlala isikhathi esinqunyiwe noma esingapheli ukuqinisekisa ukufinyelela kwamahhala emakethe yezabasebenzi eNetherlands.
Osomabhizinisi abazimele. Uma ufuna ukusebenza eNetherlands njengomuntu oziqashile, udinga imvume yokuhlala 'esebenza njengomuntu oziqashile'. Uma ufuna ukuthola imvume yokuhlala enjalo, imisebenzi ozoyenza kumele ibaluleke kakhulu emnothweni waseDashi. Umkhiqizo noma insizakalo ozoyinikela kufanele futhi ibe nomlingiswa omusha weNetherlands. Ngabe ungathanda ukwazi ukuthi yimiphi imibandela okufanele uhlangabezane nayo nokuthi yimiphi imibhalo esemthethweni okufanele uyihambise ukuze ufake isicelo? Ngemuva kwalokho ungaxhumana nabameli be Law & More. Abameli bethu bayakujabulela ukukusiza ngesicelo.
At Law & More siyaqonda ukuthi zonke izimo zehlukile. Kungakho sisebenzisa indlela yomuntu siqu. Ungathanda ukwazi ukuthi yiziphi (ezinye) izimvume zokuhlala nezokusebenza noma okuhlukile kusebenza kuwe nokuthi ngabe uyahlangabezana yini nemibandela yokubanikeza? Bese uxhumane Law & More. Law & MoreAbameli bangochwepheshe emkhakheni wezokufuduka kanye nomthetho wokuqashwa, ukuze bakwazi ukuhlola kahle isimo sakho futhi banqume kanye nawe ukuthi iyiphi imvume yokuhlala neyendawo yokusebenza evumelana nesimo sakho nokuthi yiziphi izimo okufanele uzilandele. Ngabe ufuna ukufaka isicelo semvume yokuhlala noma uhlele isicelo semvume yokusebenza? Noma kunjalo, i- Law & More Ochwepheshe bayakujabulela ukukusiza.
Thumela Previous Izibopho zomninikhaya
Post Next Isehlukaniso ngezinyathelo eziyi-10